ဒါက 3D လူတွေကောင်တာအလွန်အဆင့်မြင့်သော စက်ရေတွက် 3D လူ စျေးကွက်တွင်၎င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏များစွာသောအများစုသည် Occupancy control function ကိုထောက်ပံ့ပေးသည် လူများရေတွက်စနစ်များမူပိုင်ခွင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ plagiarism ကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၌အကြောင်းအရာသိပ်မထည့်ခဲ့ပါ။ ငါတို့နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် အရောင်း့ငါတို့နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်အားပို့ပေးပါ လူများရေတွက်စနစ်.
HPC009 လူများရေတွက်စနစ် ပစ်မှတ်၏အသွင်အပြင်၊ အမြင့်နှင့်လှုပ်ရှားမှုလမ်းကြောင်းများကိုအစဉ်အဆက်သိရှိနိုင်ရန်ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားသော dual-camera depth algorithm ကိုမော်ဒယ်လ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤသို့ဖြင့်မြင့်မားသောတိကျသောအချိန်နှင့်တပြေးညီခရီးသည်စီးဆင်းမှုအချက်အလက်များနှင့် Huawei မှအပ်နှံထားသောဗီဒီယိုဟာ့ဒ်ဝဲအရှိန်မြှင့်အင်ဂျင်ကိုရရှိသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဆက်သွယ်ရေးမီဒီယာပရိုဆက်ဆာ၊ ပစ်မှတ်မြောက်မြားစွာကိုတိကျမှန်ကန်စွာအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊
HPC009 လူများရေတွက်စနစ်ပတ် ၀ န်းကျင်အလင်း၊ အလင်းနှင့်အရိပ်တို့ကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလျှောက်လွှာအခြေအနေများနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီစေရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုက်ဖက်နိုင်သည်။ ခရီးသည်စီးဆင်းမှုကိုအလိုအလျောက်တွက်ချက်ရန်၎င်းကိုပြတိုက်များ၊ ပန်းခြံများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ ကွင်းဆက်စတိုးဆိုင်များနှင့်အခြားအခြေအနေများတွင်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ parameter မီတာကို client tools များမှတဆင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ရေတွက်သည့်,ရိယာ၊ ရေတွက်သည့် ဦး တည်ချက်နှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုအွန်လိုင်းတွင်ပြသနိုင်ပြီး၊ ရေတွက်သည့်ရလဒ်များကိုတစ်ချက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
လူများရေတွက်စက် network cable သို့မဟုတ် WIFI မှတဆင့် cloud server သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သည်၊ အချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ပို့သည်။ ထို့နောက်ခရီးသည်စီးဆင်းမှုအချက်အလက်ကိုဖြင့်တွက်ချက်သည် 3D လူတွေကောင်တာ တကယ့်အချိန်တိမ်တိုက်ပလက်ဖောင်းကတဆင့်။
ပစ်မှတ်အမြင့်ကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်စူပါမားကတ်စျေးဝယ်လှည်းများနှင့်အခြားပစ်မှတ်များကိုအလိုအလျောက်စစ်ထုတ်နိုင်သည်။ MRBဖြေရှင်းချက်ကိုရေတွက်တဲ့လူ RJ45 တစ်ခု၊ RS485 တစ်ခုနှင့်ဗီဒီယို output တစ်ခုတည်းကိုတစ်ချိန်တည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီးအခမဲ့အစီရင်ခံမှုစနစ် (သို့) အလယ်အလတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမျက်နှာပြင်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီးပုဂ္ဂလိကဆာဗာဖြန့်ကျက်မှုကိုလည်းထောက်ပံ့နိုင်သည်။
၂။ အစီရင်ခံစာအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်ကွန်ယက်ကေဘယ်ကြိုး၊ တိုက်ရိုက် intermodal သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းနှင့်တိမ်တိုက်ပလက်ဖောင်းမှတဆင့်။
၄။ အလယ်တန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သီးသန့် server interface ပရိုဂရမ် (သို့) အလယ်အလတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ပါ။
5. နေရာထိုင်ခင်းထိန်းချုပ်မှုကို HPC009 ၏နောက်ခံဆော့ဝဲလ်မှတဆင့်သိရှိနိုင်သည် လူတွေကဖြေရှင်းနည်းကိုရေတွက်တယ်။
စီမံကိန်း ပစ္စည်း Parameters စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်း
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ DC12～36V 15% ၏ဗို့အားအတက်အကျခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု 3.6W ပျမ်းမျှစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု
စနစ် operating ဘာသာစကား တရုတ် / အင်္ဂလိပ် / စပိန်
စစ်ဆင်ရေး interface ကို ကို C / S စစ်ဆင်ရေး configuration ကို mode ကို
ပြင်ပ interface RS485 interface ကို စိတ်ကြိုက် baud နှုန်းနှင့် ID၊ multi စက်ကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့သည်
RS232 interface ကို အကောက်ခွန်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်
RJ45 ကိရိယာ debugging, http protocol ကိုဂီယာ
ဗွီဒီယို output PAL, NTSC စနစ်
Operating အပူချိန် -35 ℃ ～70℃ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်၌
သိုလှောင်အပူချိန် -40 ~ 85 ℃ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်၌
ပျမ်းမျှကျရှုံး - အခမဲ့အချိန် MTBF နာရီပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်
တပ်ဆင်အမြင့် 1.9 ~ 2.2m
0.001 lux (မှောင်မိုက်သောပတ်ဝန်းကျင်) ~ 100klux (ပြင်ပတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်)၊ မလိုအပ်သောအပြည့်အဝအလင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထွန်းလင်းမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိသောတိကျမှန်ကန်မှုနှုန်း။
အမျိုးသားအဆင့် QC / T 413 "မော်တော်ယာဉ်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၏အခြေခံနည်းပညာအခြေအနေများ" နှင့်တွေ့ဆုံ
EN 62471: 2008“ မီးခွက်များနှင့်ဆီမီးခွက်များ၏ဓာတ်ပုံဇီဝဗေဒလုံခြုံမှု” နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဒီဂရီ IP43 နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း (လုံးဝဖုန်မှုန့်၊ ရေစိုခံနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း)
အပူလွန်ကျူး passive ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပူလွန်ကျူး
အရွယ်အစား 178mm * 65mm * 58mm
HPC009 3D လူများရေတွက်သည့်စနစ်ဗီဒီယို
ကျွန်တော်တို့မှာ IR အမျိုးအစားများစွာရှိသည် လူများရေတွက်စနစ်, 2D, 3D, AI အ လူများရေတွက်စနစ်, သင်နှင့်ကိုက်ညီမည့်တစ်ခုအမြဲရှိသည်, ကျေးဇူးပြု။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, ငါတို့အသင့်တော်ဆုံးအကြံပြုလိမ့်မည် လူများရေတွက်စနစ် 24 နာရီအတွင်းသင်တို့အဘို့။
ရှေ့သို့ မိုဘိုင်း DVR အတွက် MRB ယာဉ်ကင်မရာ
နောက်တစ်ခု: MRB AI ကိုလူအစုအဝေး HPC198 တန်ပြန်